Moon Knight: Rahoviana no hivoaka amin'ny Disney Plus? - Vaovao Ambony
Daty famoahana Moon Knight Disney Plus
Misy tranofiara ve?
Inona no atao hoe mpilalao?
Inona no anjara asan'i Gaspard Ulliel ao amin'ny Moon Knight?
Inona no herin'ny Moon Knight?
Navoaka tamin'ny farany ny tranofiara Moon Knight ho an'ny andian-tsarimihetsika Marvel Cinematic Universe, izay manome ny mpankafy ny fijeriny voalohany. oscar isaac amin'ny andraikitry ny toetra titular.
'Ny andian-tantara dia mihodinkodina amin'i Steven Grant, mpiasan'ny fivarotana fanomezana malefaka izay iharan'ny fahatapahan-jiro sy ny fiverenana amin'ny fiainana teo aloha', araka ny famintinana ofisialy. Fantatr'i Steven fa voan'ny fikorontanan'ny maha-izy azy izy ary mizara vatana amin'ny mpikarama an'ady Marc Spector. Tsy maintsy mivezivezy amin'ny maha-sarotra azy izy ireo rehefa atsipy ao anaty mistery mahafaty misy ireo andriamanitra mahery any Ejipta satria akaiky azy ireo i Steven / fahavalon'i Marc.
Raha ny fandehany fa ny tranofiara Moon Knight dia manome ny mpijery hijery ny zava-misy simba an'i Steven, toy ny Ny an'i Ethan Hawke mandrisika an'i Steven/Marc hanaiky korontana ny mpanohitra. Avy eo i Steven dia niova ho ilay superhero nomena anarana azy, izay lohatenin'ny sarimihetsika.
Tongasoa eto amin'ny korontana Jereo ny tranofiara vaovao ho an'ny Marvel Studios' @MoonKnight ary manomboka mandefa ny andiany Original amin'ny 30 martsa @DisneyPlus . pic.twitter.com/T5E2ZTgaxP
— Marvel Studios (@MarvelStudios) 18 Janoary 2022
Taorian'ny fahombiazan'ny WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier, ary Loki, dia tsy mahagaga raha i Marvel dia mitondra andiana fahitalavitra Disney Plus vaovao amin'ny efijery amin'ny 2022.
Jereo koa : Faly ve ianao amin'ny sarimihetsika Marvel Avengers 5 manaraka?
Ny tranofiara Moon Knight dia nanamafy ihany koa fa ny andiany amin'ny fahitalavitra dia hiseho voalohany amin'ny Disney Plus amin'ny 30 martsa 2022, araka ny nambara teo aloha.
Disney Plus dia misy £ 79.90 isan-taona na £ 7.99 isam-bolana raha misoratra anarana amin'ny famandrihana isan-taona ianao.
Ny andiany voalohany dia nokasaina hanomboka horonantsary any Atlanta tamin'ny Novambra 2020, saingy ny fameperana coronavirus mitohy dia mety nahatonga ny fanemorana ny famokarana raha i Disney kosa dia mifantoka amin'ny andiany teo aloha amin'ny franchise. Nanomboka tamin'ny Aprily 2021 tany Budapest ny fakana sary ary nokasaina hifarana tamin'ny Oktobra tamin'io taona io.
Araka ny filazan'ny mpamokatra Kevin Feige, ny Moon Knight dia hozaraina ho fizarana enina, izay haharitra eo anelanelan'ny 40 sy 50 minitra ny halavan'ny tsirairay.
Ny Disney Plus Day tamin'ity taona ity dia nanasongadina ny voalohany voalohany amin'ny andiany voalohany amin'ny andiany Moon Knight, izay naseho manokana tamin'ny serivisy streaming.
Ireo seho dia nanasongadina an'i Oscar Isaac ho mpilalao fototra, izay niaiky fa sarotra ny manavaka ny nofinofiny sy ny fiainany mifoha amin'ny iray amin'ireo sehatra.
Ny fisehoany ao amin'ny sarimihetsika dia ahitana azy nibanjina ny fitaratra tao amin'ny efitra fandroana, toa sahiran-tsaina, ary koa naseho teo amin'ny manodidina ny sasany tao amin'ny zavakanto Ejiptiana fahiny, izay mifanaraka amin'ny tantaran'ny tantara an-tsary.
Jereo koa : The Mandalorian Season 3: Miverina ve izany? Havaozina na nofoanana!
Misy ihany koa ny sarin'i Isaac manao akanjo Moon Knight, saingy saron'ny fakan-tsary izy, satria hita avy ao aoriana na mihazakazaka manerana ny lanitra amin'ny misasak'alina.
Ireo mpankafy dia afaka mijery ity fijery voalohany manokana momba ny Moon Knight ity amin'ny fitsidihana ity rohy ity:
Oscar Isaac ho Moon Knight/Marc Spector/Steven Grant
Ethan Hawke ho Arthur Harrow
May Calamawy ho TBC
Gaspard Ulliel ho Midnight Man/Anton Mogart
Lucy Thackeray ho Donna
Araka ny filazan'ny The Hollywood Reporter, Ethan Hawke dia hiseho miaraka amin'i Isaac amin'ny anjara asa ratsy tsy fantatra, ary i May Calamawy koa dia narotsaka tao amin'ny andiany ho mpilalao mpanohana.
Ny ekipan'ny mpanoratra Moon Knight dia hotarihin'i Jeremy Slater, izay niasa teo aloha tamin'ny fampifanarahana ny Netflix amin'ny tantara superhero The Umbrella Academy.
Slater dia efa niasa tamin'ny tetikasa toy ny Josh Trank's Fantastic Four reboot, ny fampifanarahana amin'ny Death Note an'ny Netflix, ary ny andiany fahitalavitra Exorcist fohy, ankoatry ny hafa.
Tany am-piandohan'ity taona ity dia nitatitra ny Deadline fa i Mohamed Diab dia ho talen'ny tetikasa, na dia mbola tsy nohamafisin'ny Marvel Studios an-tsoratra izany.
Moon Knight mpilalao sarimihetsika frantsay Gaspard ulliel toy ny Midnight Man/Anton Mogart, izay nilalao an'i Gaspard Ulliel.
Taorian'ny nahavitan'ny horonan-tsarimihetsika ho an'ny anjara asany ao amin'ny Moon Knight, dia maty tamin'ny lozam-pifamoivoizana ilay mpilalao tamin'ny Janoary 2022 fony izy 37 taona.
Ny Mamatonalina dia miseho amin'ny boky tantara an-tsary ho toy ny mpanao heloka bevava mitafy akanjo izay nandray anjara tamin'ny halatra be tombom-barotra ary namely matetika tamin'ny mamatonalina, ka nahazo ny anarana hoe Midnight Man.
Ho fanampin'izany, ho fanampin'ny fifandonana isan-karazany tamin'i Moon Knight tao amin'ny tantara an-tsary, i Mogart koa dia rain'ny toetra Jeff Wilde, izay lasa mpiara-miasa amin'ny Moon Knight fantatra amin'ny anarana hoe Mamatonalina.
Tsy fantatra amin'izao fotoana izao hoe firy ny fizarana hisehoan'i Ulliel amin'ny maha Mogart azy nandritra ny fotoana niasany tao amin'ny fandaharana.
Jereo koa : Mety hiverina amin'ny taona 2022 ve ny Agent Carter Season 3?
Izany hoe, ny fanontaniana. Miaraka amin'ny alter egos marobe, Marc Spector afaka manangona vaovao na aiza na aiza eto amin'izao tontolo izao nefa tsy hita na fantatra. Jake Lockley no anarany, ary manambady an'i Steven Grant izy, izay socialite sy millionaire amin'ny fomban'i Bruce Wayne.
Niova ny maha-izy azy, sy ny tantarany, nandritra ny fisehoany tao amin'ny boky tantara an-tsary. Amin'ny dikan-teny sasany, dia nomena fahaiza-manao mihoatra noho ny olombelona izy, toy ny hoe izy ilay izy Moon God Khonshu's sambo. Eo imason’ny hafa, dia mety maty fotsiny izy.
Na ny ekipan'ny mpanoratra ny seho dia handeha amin'ny lalana mahery vaika kokoa miaraka amin'ity andiany ity dia mbola eny amin'ny rivotra, na dia misy soso-kevitra aza fa ny Moon Knight dia homena karazana hery mahery vaika amin'ny andiany vaovao.
Izany rehetra izany dia momba ny Moon Knight. Araho hatrany ny vaovao farany ary misaotra anao namaky!
Raha tena nofoanana tokoa ve ny Altered Carbon Season 3?
Leonardo DiCaprio dia miverina miasa miaraka amin'ny Don't Look Up
tranokala fandefasana sarimihetsika maimaim-poana
Fitsarana maimaim-poana amazon prime tsy misy carte de crédit
maninona no tsy lalaovin'i netflix
vpn tsara indrindra hijerena an'i Netflix
tranonkala maimaim-poana ambony hijerena fandaharana amin'ny fahitalavitra
tranokala ahafahanao mijery fandaharana amin'ny fahitalavitra
kaody lalao maimaim-poana xbox iray